I-Paradise Whakatekateka,Okokuqala Ukubona Ukuphuma Kwelanga.
I-Paradise Whakatekateka iseduze nomfula i-Waiapu noLwandle. Le ndlu yakhiwa ngo-1950-53. Yayikade iyigumbi lokulala eli-3, kodwa amagumbi angu-2 aphendulwe aba iSitting room/igumbi lokudlela. Inebhedi ephindwe kabili, ikhishi eli-1.
Igumbi lokugezela,Izidube Zendawo Yokupaka,Ukubukwa kolwandle,Isiko LamaMaori,Izindawo Ezinkulu Zokulala ezinomlilo ovulekile nokuzijabulisa kwamaMaori,I-Maori Earthoven(Hangi)ukupheka ukudla,Kuhle ukudoba,Izindawo Zomlando,Intaba Yomlando i-Hikurangi enomlando,Ayikho indlu yangasese ngaphakathi kodwa isikhathi eside. iconsi.Ukubukwa kolwandle.Own par 5 inkundla yegalofu.
Umbono owesabekayo lapho ilanga liphuma olwandle, nalapho lishona.Linomlando walo onezindaba ezimnandi.Amasosha ayisikhombisa alwela iNkosi nezwe ayengawaseWhakatekateka.Igama likaWhakateteka livela kumara amnandi odumo.Wawubona kahle 5 izici ezibaziweyo eNtabeni i-Hikurangi ekuseni ecwathile. Kwakulapha, eduze nomfula i-Waiapu ''Te Hatepe lapho ivangeli lethulwa khona okokuqala.
sinezikole emphakathini wangakithi, sine-RSA.to socialise, super market store
hhayi kude,Vege Gardens.Omkhulu Kunabo Bonke Omnyama Ogcwele Umdlali UGeorge Nepia ungcwatshwe eduze.
Ngifuna izivakashi zami zijabulele ukuhlala kwazo nendawo, nokuthi ukuhlala kwazo kuzoba a
ekhumbulekayo.Ngiyatholakala ukuthi ngizihlanganise nabo, futhi ngibabonise abaningi
izindawo zezithakazelo lapho kudingeka.